Lolu chungechunge lwe-proudcts lunokuphakamisa ukuphakama kusuka ku-4m kuye ku-18m, futhi kulayishwa isisindo kusuka ku-300kg kuye ku-500kg, ngemodi yokuphakamisa yokusebenza ngesandla, ugesi, ibhethri kanye nodizili, njll. Amathuluzi kagesi wokuqhuma angabekwa ezindaweni ezikhethekile; susa ipulatifomu yedivayisi yokulawula ingafakwa ngokuya ngezidingo zabasebenzisi, ezinenzuzo kufaka phakathi ukuhamba okulula, indawo enkulu namandla okuthwala aqinile, okuvumela ukusebenza ngasikhathi sinye kwabantu abaningana, nokuphepha nokuthembeka, ngakho-ke kungumkhiqizo ofanele wokuphakanyiswa komoya .
Ipulatifomu yethu yokuphakamisa iselula inesici esiphakeme sokuphepha. Isebenzisa ukuvikelwa komkhawulo ophindwe kabili, isebenzisa idivaysi yokuqhuma ukuvimbela ukudilika kwepayipi le-hydraulic, inedivayisi yokuvikela ukuvuza, inedivayisi yokuphepha ukuvimbela ukuphakamisa ipulatifomu (ikheshi), inedivayisi yokwehla okuphuthumayo uma kwenzeka amandla ehluleka, futhi inezinhlobonhlobo izinketho zamandla.
Izindawo ezisebenzisekayo: indawo yokwakha, indawo yokusebenzela, indawo yokugcina izimpahla, indawo yokugcina okusanhlamvu, isiteshi, ihhotela, isikhumulo sezindiza, isikhumulo semikhumbi, igalaji, imboni yezemidlalo, ipayipi eliphakeme nokunye ukufakwa kwemishini ephezulu, ukugcinwa, ukuhlanzwa, njll. Kusetshenziselwa nokuphakamisa imishini ukugcinwa, ukulungiswa kwezinsiza zamandla ensimu, ukugcinwa kwesakhiwo sensimbi, njll.
Usayizi 1.1KW / 220V
Langaphambilini Izikele ezizihambisayo Phakamisa
Ipulatifomu Yomsebenzi Wezindiza waseChina
Ipulatifomu Yokuphakamisa umfutholuketshezi Ehambayo